ယနေ့မြန်မာကဗျာယဉ်ကျေးမှုအရွေ့ « lunnsetnoemyat
Mar7 by lunnsetnoemyat
This entry was posted in လွန်းဆက်နိုးမြတ် စာပေရေးရာ.
5 comments on “ယနေ့မြန်မာကဗျာယဉ်ကျေးမှုအရွေ့”
အရွေ့တွေကို လာငေးသွားတယ်။ ခုတလောတော့ ကဗျာရေးတာ ကျဲပါတယ်။
လွန်းဆက်နိုးမြတ်ကို ပြန် link ထားတယ်။ ဟိုတလောကတော့ ၀ဲစွဲလို့ ဘလော့ဂ်link တွေ ခဏ ဖြုတ်ထားတာ။
Zaw Zaw Htun.(Thura Min Htin) says:
1.	Systematically derange the language, for example, writeaword consisting only of prepositional phrases, or addagerundive to every paragraph, etc. (Anne do come too, to come and to come not to come as to)
ဘာသာစကားအား စနစ်ကျစွာ အစီအစဉ်မဲ့အောင်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် စာကြောင်းမှာ prepositional phrases ပါတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ (သို့မဟုတ်) ကြိယာ(Verb) ကို(-ing) ပေါင်းပြီးသုံးတဲ့ “Gerund” တွေရဲ့ ကတ္တားပုဒ် အသုံးတွေကို စာပိုဒ်တိုင်းလိုက် ဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့် စာသားအစီအစဉ်အား ကမောက်ကမဖြစ် စေသည်။ ဥပမာ I do not see it making any difference. အဲဒီထဲက (it making)တို့ (to come) တို့တွေ ကို စာပိုဒ်တွေထဲ ပေါင်းထည့်ထားခြင်းကိုဆိုပါတယ်။ Making ကို Subject မှာ နာမ် အနေနဲ့ သုံးရင် Gerund ပါ။ ဒါပေမယ့် (it making) ဆိုတဲ့ အတွဲကို ကတ္တားမှာ သုံးရင်တော့ လက်တင်ဘာသာစကားရဲ့ အလိုအရ Genitive ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။
2.	Getagroup of words (makealist or select random), then from this words (only) intoapiece of writing – whatever the word allow. Let them demand their own form, and/or
စကားလုံးများကို အစုဖွဲ့ (စာရင်းလုပ်သလို ဒါမှမဟုတ် ကျပန်းကောက်ထားသလိုမျိုး) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီစကားလုံးများ ခွင့်ပြုသလောက် ခင်ဗျားရေးပစ်ပါ။ အဲဒီစကားလုံးတွေဟာ စာရေးခြင်း အပိုင်းအစအထိကို စီးဆင်းခွင့်ပြု လိုက်ပါ။ သူတို့ပုံစံကို သူတို့တောင်းဆိုပါစေ။
The same word in every line oracertain place in every paragraph etc Design word.
စကားလုံးတူတွေ ဒါမှမဟုတ် စကားလုံးတစ်လုံးထဲကိုပဲရှိပြီးသား စကားပြေစာပိုဒ် ဒါမှမဟုတ် ကဗျာထဲသို့ထည့် ရေးပါ။ စာကြောင်းတိုင်းမှာ ထည့်ရေးပါ။ စာလုံးများကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပါ။
ဥပမာ။ ။ Getagroup of words
ဆူဆန်ဟိုး (Susan Hwoe) ရဲ့ကဗျာဖြစ်တဲ့ (Beffalo) ကိုဥပမာပေးလည်းရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အယ်လန်ဂျင်းဇဘတ်ရဲ့ ဘော်ဒါ ဂျက်ကာရူးဆေ့ ( Jack Kerouac) ရဲ့ စနေမွန်းလွဲပြတင်း ( Saturday After-noon Window) ကဗျာကို ပြောရင်လည်းရတယ်။
Raw	Bay	Whom
Debt	Gush	Big
Hums	Worm	Year
Yogi	Tide	Dust
(P-323)	JAXK KEROUAC ( BOOK OF SKETCHES)
အထက်ပါ အပိုဒ်က ကဗျာရဲ့ ပထမအပိုဒ်ပါ။
3.	Write what cannot be written, for example, compose an index (Read an index asapoem) ရေးလို့မရနိုင်တဲ့ အရာကိုရေးပါတဲ့။ ဆိုလိုတာက စာရေးသားနည်း ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အမျိုးအစားကိုဆိုပါတယ်။ စာရင်းရေးသလို တစ်ခုချင်းချရေးပစ်ပါ။ (စာရင်းတွေကိုကဗျာ အနေနဲ့ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ)
ဥပမာ။ ။ Write what cannot be written. (compose an index)
ဂျက်ကရူဆေ့ရဲ့ ကဗျာကိုပဲဥပမာလုပ်ရမှာပဲ။ အခြားသောကဗျာဆရာများရေးတဲ့ ပုံစံတူတွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဂျက်ရဲ့ကောက်ကြောင်းရဲ့စာအုပ် (BOOK OF SKETCHES) ထဲမှာပါတဲ့ ကဗျာပါ။ စာမျက်နှာ ၁၀၉ ဖြစ်ပြီး ကဗျာအဆုံးသတ်မှာ 1047E. Santa Clara St. လို့ရေးထားပါတယ်။ နေရာများကို မှတ်စုထဲချရေးထားရဲ့။
4.	Attempt writing inastate of mind that seems least congenial.
စိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားချက်နဲ့ရေးပါ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားရေးတဲ့စာတွေဟာ အငြင်းပွားဖွယ် များများ ဒါမှမဟုတ် လက်ခံနိုင်စရာ နည်းနည်းရှိတဲ့ စကားလုံးများကိုသုံးပါ။
ဥပမာ။ ။ Attempt writing inastate of mind. (ခံစားချက်ကိုမူတည်တဲ့အသုံး)
ဒီအချက်ကတော့ ကဗျာရေးသူနဲ့ ဝေဖန်သူတွေ အငြင်းများများပွါးဖို့ LP ကရည်ရွယ်တယ်။ ဥပမာ ရောဘတ်ဂရီးနီးယား (Robert Grenier) ရဲ့ Alchering စုစည်းမှုများမှာ ပါဝင်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းကို ကြည့်ပါဦး။
S o meo ldg u y s w I t h c h s c y t hes
ဒါကစာလုံးလေးလုံးပါတဲ့ စကားစု ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်က တံစဉ်းများနှင့် လူအိုတစ်ချို့
( some/ old guys/ with/ scythes) ပါ။
ပာရရင် ပြင်သစ်ကဗျာဆရာမ ကက်သရင်ပေါ့ဇီ (Catherine Pozzi)
(18821934) ရဲ့ Nyx ကဗျာကို ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကဗျာက LP ထက်ရှေ့ကိုအများကြီးစောပါတယ်။ Nyx ကဗျာရဲ့ ပြင်သစ်မူရင်းမှာတော့ ၀ါကျအစတွေမှာ ‘O’ တွေနဲ့စပြီး နောက်ဆုံးနှစ်ကြောင်းကတော့ “Je”နဲ့စပါတယ်။ ပင်းဂွင်းထုတ် ပြင်သစ်ကဗျာများ (၁၈၂၀-၁၉၅၀) ရဲ့ အင်္ဂလိပ်မူမှာတော့
O you my nights, O anticipated blackness O proud land,
O stubborn mysteries O prolonged gazes, O cloud striking thander
O ∆ ∆ ∆ (P-621 The Penguin Book of French Poetry) (1820-1950)
အို အသင် ကျွန်ုပ်၏ညများ၊ အို ကောင်းမြတ်သော် မျှော်လင့်ချက်အနက်ရောင်၊ အို မာနရှိကုန်သောကုန်းမြေ၊
အို ခေါင်းမာလွန်းသော လျှို့ဝှက်ချက်များ၊ အို ဆန့်ထွက်သော ငေးမောမှုများ၊ အို တိမ်တိုက် ရိုက်ခတ်နေသော မိုးကြိုးသွား
I am Ko Chan Min Eain ‘sFriend